Uhlobo lwe Lobelia kuhlanganisa ezihlukahlukene nezitshalo (ingqikithi ezingaphezu kuka-300, kwamasiko - 20) - kokubili single futhi iminyaka eminingi; utshani, izihlahla kanye nezihlahla into encane. Emvelweni, zikhula ikakhulukazi ezisondelene nazo. Lesi sitshalo ngokoqobo embozwe ezincane, izimbali ezimise ngendlela engavamile-: lobelia yokuqhuma eside futhi uchichima, ukwakha utshani noma ezimbizeni aluhlaza okwesibhakabhaka, emhlophe, onsomi, violet, onsomi, pink noma blue "cap".
Okuvame kakhulu kokubukwa kwethu lezi zitshalo - LOBELIA ERINUS (Lobelia erinus), esibizwa nangokuthi ezhevidnoy, ovela eNingizimu Afrika. Hlukanisa amafomu zaso ezinhlanu: umgibeli, compact, esakaza, yimani niqonde into encane. Climbing lobelia has amahlumela elengayo kufika ku-50 cm Lobelia compact - amancane, ehlathini round obukhulu, ukuphakama lezinti zalo - akukho kuka-15 cm amahlumela lobeline esakaza abe obuphelele kuze kube 35 cm, lobeline uqonde - 25 cm: .. A encane ehlathini-okwenyanga ikholomu. Ekugcineni, lobelia yemifino ikhula ukuphakama 10-12 cm kuphela. It blooms kakhulu kakhulu, futhi izimbali neziqu zalo mkhulu amahlamvu.
Ngo LOBELIA ERINUS amagatsha mncane sifanamsindvo namaqabunga - amancane, ne imiphetho serrated. Izimbali kwalesi silwane akhiwa umoba esifushane, ubukhulu babo - mayelana 1.5-2 cm Njengomvini ezinye izimbali engadini, LOBELIA ERINUS abandayo ukumelana futhi blooms kuze kube frost .. Lesi simila - zisetshenziswa, kodwa ngokuvamile kwakhula njengoba Letnik. Kuleso simo-ke kutshalwa njengoba zisetshenziswa, kufanele igcinwe ebusika greenhouse ezingeni lokushisa kusuka +2 kuya +10 degrees Celsius.
Njengabanye abaningi esekhulile evulekile phansi izimbali, lobelia unzima ngempela. Yena udinga a okuxekethile, loamy noma sandy loam umhlabathi nokukhanya kwelanga okwanele. Lobelia ezhevidnaya uthanda ukuthambisa luningi. Kumelwe sivumelane njalo: uma sezomile inhlabathi izimbali liyaphela.
Ukuhlwanyela imbewu lobelia izithombo ngoNdasa. Amancane kakhulu - e 1 igremu iqukethe imbewu acishe abe yizinkulungwane 50, ngakho kufanele exutshwe isihlabathi futhi abahlwanyelwe ubuso bezwe, hhayi ovala .. Umthamo kute bahlanganise ifilimu esobala noma ingilazi nendawo endaweni okwanele. imbewu LOBELIA ERINUS ziqhume at okushisa kusuka degrees +20 ukuba +22 nengxenye-amasonto amabili. Izithombo zikhule. Labo ukuya ukukhula ngokushesha kwezinye, kungenziwa wasika nge sikelo - ungesabi, kuzobalwa kuphela ukuzuza izitshalo: emva kokusoka beqala sezihlahla. Ngemva kwenyanga ukuhluma kwezinhlobo imbewu, kanye nomhlaba obhekwe izicabha ezimbili, izithombo dive. Njengezinye imibala eminingi, lobelia uyakwazi withstanding ithempelesha -2 degrees Celsius. Nokho, kungcono kakhulu ukutshala izithombo ku ekhanyayo ngasekupheleni May, emva frost.
Blooms LOBELIA ERINUS okuyisilinganiso sabangu-izinyanga 2-2,5 emva kokutshala. Igagasi lokuqala izimbali usuphothuliwe ngo-August. Kusukela ekupheleni kwawo isitshalo kufanele asikwe ukuphakama mayelana 5-10 cm. Lokhu kuzokwenza bafake umfutho ekuthuthukiseni amahlumela amasha, futhi lobelia imbali futhi. inkathi zezimbali kuyoba eside uma ngendlela esifike ukususa egqwalile sifanamsindvo. Isithelo lobelia - capsule, imbewu iphila iminyaka emithathu.
Imigomo ekunakekeleni zinhlobo ezahlukene nezinhlobonhlobo Lobelia kungahluka kancane. Ngakho, hang-downing izitshalo, njengazo zonke nzalo, kuthiwa okusakazwa kusuka cuttings. Lokhu kungenxa yokuthi phakathi ukubuyabuyelela nge imbewu, abazi ukugcina varietal yabo izici. Ukwenza kuvamise ngasekupheleni ebusika.
Kukhona izinhlobonhlobo eziningi lobelia. Ezinye ethandwa kakhulu - compact lady ezimhlophe, Kayzer Vilgelm, ampelnye grade isafire. baningi Lobelia Crystal Palace - ezihlabayo yayo encane compact izimbali ubude-10 cm ngobuningi embozwe luhlaza noma onsomi ngombala. amahle kakhulu futhi lobelia Blue Breeze: omnyama izimbali zayo blue - nge okungafani iso elimhlophe. Ngokuvamile, lobelia - omunye izitshalo simbonge kakhulu ngokwenzenjalo nesingakhangi, zom kusukela ekuqaleni kwehlobo ekwindla sihambile, futhi abaningi buyisiphi nezinhlobonhlobo ukukhetha for ukutshala izitshalo ezifana ukuthi bazobe sebecela ukuthi.
Rose Blek Medzhik: incazelo ezihlukahlukene
Belarusian ushukela gooseberries, ikakhulukazi izinhlobo, zizalela, ukunakekelwa
Ngingaba nayo banana endaweni ababezolala kuyo ebusuku? Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Nestor Kirchner: Biography, izithombe, ezombusazwe Nestor Kirchner, imbangela yokufa, ukumbelwa
Biography nemisebenzi ka-Aleksandru Gladkov